eco-friendly 10g 12g 15g njll non nokwelukiweyo medical alahlwa cap cap
Lesi sivalo esiphefumulayo, esibuyisela amalangabi sinikeza umgoqo wezomnotho wokusetshenziswa usuku lonke.
Ifaka ibhande elinwebekayo le-snug, ukulinganisa okulungiswayo futhi yakhelwe ukumboza izinwele ezigcwele.
Ukunciphisa usongo lwama-allergener emsebenzini.
1. Amakepisi wokunamathisela alahlwayo yi-Latex Free, Ephefumulayo, Ayina-Lint;I-Lightweight, Soft and Breathable Material yokunethezeka komsebenzisi.Ngaphandle kwe-latex, akukho lint.Yenziwe ngezinto ezilula, ezithambile, ezingenamoya ze-polypropylene ezingezona ezilukiweyo, ezikunikeza umuzwa okhululekile.
2. Amakepisi anomklamo onwebekayo azungeze ikhanda ukuze alingane okuvikelekile.I-Bouffant Cap enomklamo olahlwayo, ukusetshenziswa kanye nje kwalesi sigqoko senetha lezinwele kuyilokho okudingayo.Iza ngosayizi we-bouffant, okusho ukuthi ilingana wonke umuntu.Ibhendi yokunwebeka inganwebeka ifike kumayintshi owafunayo, ngakho-ke ungakhathazeki ngeke ikulungele.
3. I-lightweight kanye ne-strip shape yayo ayithathi isikhala esiningi, isebenziseka kalula futhi ilahle, ihlanzekile futhi isebenza kahle.Inketho enhle yokuhamba.
1. Ezilahlwayo, ezingokomnotho, ezilungele imvelo.
2. Ithambile, iyaphefumula, ingasindi futhi inethezekile.
3. Ikepisi ligoqwe ngokuhlangene libe umucu ovuleka kalula ukuze lime.
4. Amakepisi angavimbela izinwele ukuba ziwe futhi zihlale zihlanzekile futhi zihlelekile.
5. Zonke izinhlobo zombala, ubukhulu kanye negrama ziyatholakala.
6. Amalogo amakhasimende angaphrintwa kuwo.
7. Indwangu ye-SBPP engasindi yokunethezeka nomnotho.
8. Ibhande lokunwebeka elithambile elingacasuli.
Osayizi kanye nephakheji
10gsm, 12gsm, 15gsm njll
Ukunwebeka okuphindwe kabili noma okukodwa
Inkampani yethu iseSifundazweni saseJiangsu, eChina.I-Super Union/SUGAMA ingumnikezeli ochwepheshe wokuthuthukiswa komkhiqizo wezokwelapha, ehlanganisa izinkulungwane zemikhiqizo emkhakheni wezokwelapha.Sinemboni yethu egxile ekwenzeni i-gauze, ukotini, imikhiqizo engalukiwe. izinhlobo zamapulasi, amabhandeshi, amakhasethi neminye imikhiqizo yezokwelapha.
Njengomkhiqizi ochwepheshe kanye nomphakeli wamabhandeshi, imikhiqizo yethu iye yazuza ukuthandwa okuthile eMpumalanga Ephakathi, eNingizimu Melika, e-Afrika nakwezinye izifunda.Amakhasimende ethu anezinga eliphezulu lokwaneliseka ngemikhiqizo yethu kanye nezinga eliphezulu lokuthenga kabusha.Imikhiqizo yethu idayiselwe emhlabeni wonke, njenge-United States, iBrithani, iFrance, iBrazil, iMorocco njalonjalo.
I-SUGAMA ibilokhu ibambelela esimisweni sokuphatha ngokwethembeka kanye nefilosofi yenkonzo yokuqala yamakhasimende, sizosebenzisa imikhiqizo yethu ngokusekelwe ekuphepheni kwamakhasimende kwasekuqaleni, ngakho inkampani ibilokhu ikhula endaweni ehamba phambili embonini yezokwelapha i-SUMAGA ine. ihlale inamathisele ukubaluleka okukhulu emisha ngasikhathi sinye, sinethimba lochwepheshe elinesibopho sokuthuthukisa imikhiqizo emisha, lena futhi inkampani unyaka ngamunye ukuze kugcinwe inkambiso yokukhula ngokushesha Abasebenzi balungile futhi banethemba.Isizathu siwukuthi inkampani igxile kubantu futhi inakekela wonke umsebenzi, futhi abasebenzi banomuzwa onamandla wokuzazi.Ekugcineni, inkampani ithuthuka ndawonye nabasebenzi.
Okwedlule: ishidi lekhava yombhede wezokwelapha elilahlwayo elingelukiwe elingangenwa amanzi
Olandelayo: nonlukiweyo wamazinyo khuhla cap esibhedlela ukuhlinzwa alahlwa udokotela cap
I-Bouffant Cap elahlayo
Ikhephu Yokuhlinza Elahlwayo
Umhlengikazi Wezempilo Wokuhlinza/Ikhanda likaDokotela Elilahlwayo
Incazelo Yomkhiqizo Ikepisi likadokotela, elibuye libizwe nge-nonwoven nurse cap, ukunwebeka okuhle kuhlinzeka ngokulingana kahle kwekepisi ukuya ekhanda, linganqanda izinwele ukuwa, isudi yanoma yisiphi isitayela sezinwele, futhi lisetshenziselwa ikakhulukazi ulayini wezokwelapha nokudla olahlwayo.Material: PP non nokwelukiweyo / SMS Isisindo: 20gsm, 25gsm, 30gsm njll Uhlobo: nge thayi noma nokunwebeka Usayizi: 62 * 12.5cm/63 * 13.5cm Umbala: blue, oluhlaza, ophuzi njll Ukupakisha: 10pcs / isikhwama, 100pcs / ctn P ...
I-Bouffant Cap Engalukiwe Eyindilinga Elahlwayo
Incazelo Yomkhiqizo Le nto ye-non-woven bouffant round cap inezinga eliphezulu lamandla nobude, iyindawo enhle yomoya, kodwa, exosha amanzi, ayinangozi futhi ine-antibacterial.Ngaphandle kwanoma iyiphi insimbi, eco-friendly, ephefumulayo efaneleka ngokukhethekile izimboni ze-elekthronikhi, impilo yansuku zonke, isikole, ukuhlanzwa kwemvelo, ezolimo, isibhedlela kanye nempilo yansuku zonke nokunye.Material: PP Indwangu non nokwelukiweyo Isisindo: 10gsm, 12gsm, 15gsm, njll Usayizi: 18'',19...